Shirkada Golis Gaalkacyo oo Xarun Cusub xariga ka Jartay | Golis Telecom Somalia
Shirkada Golis Gaalkacyo oo Xarun Cusub xariga ka Jartay
Shirkada isgaarsiinta golis laanteeda magaalada Gaalkacyo ayaa maanta daah furtay dhisme cusub oo loogu tala galay adeegida shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo iyo nawaaxigeeda.
Munaasabad balaaran oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf iskugu jirtay masuuliyiinta gobolka qaar ka mid ah isimada iyo maamulka sare ee shirkada isgarsiinta golis ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee xarunta golis ee Galkacyo.
Ugu horayntii waxaa si rasmi ah u daahfuray xafladan Maamulaha shirkadda Golis Gaalkacyo Faarax Bootaan, wuxuuna u mahad celiyay martida ka soo qeybgashay xaflada, dabadeedna wuxuu faah faahin dheer ka bixiyay furitaanka xafiisyada shirkaddu soo kordhisay oo ay ka mid yihiin xafiiska iibka iyo adeega bulshada oo horey u jiray balse hadda la balaariyay, maadaama macaamiisha shirkaddu ay sii kordhayaan.
Gudoomiyaha Gobolka Mudug Maxamed Yuusf Jaamac (Tigey) oo horay uga tirsanaan jiray adeegayasha shirkada Golis laanteeda Gaalkacyo ayaa ka hadlay xaflada wuxuuna sheegay in shirkadda Golis ay adeegyo badan ka haqab tirtay dadweynaha ku nool dhamaan gobolada Puntland isla markaana ay adeegeeda ku baahisay ilaa iyo xaduudaha dalka oo dhan.
Suldaan Cabdi Salaan Suldaan Maxamed oo ka mid ah isimada gobolka Mudug ayaa isna hadalo kooban ka soo jeediyay munaasabada waxaana uu aad u amaanay horumarka baaxada leh ee ay gaartay shirkada Golis waxaana uu ku sii booriyay in ay intaas ka sii balaariyaan waxqabadka bulshada ee ay haatan wado shirkada Golis.